China Factory vato voajanahary marbra zaridaina marbra lehibe loharano rano loharano loharano sy mpanamboatra | Asa Atisan
Sary sokitra Resin Fiberglass
Art Marbra An-trano
Pavilion / trano falafa
Sary sokitra maritrano
Sary sokitra vy tsy misy fangarony
Large Granite Stone Granite an-trano haingon-trano M ...
Fivarotana mafana zaridaina lehibe haben'ny fiainana volo volo ...
Vatom-pahasoavana marbra vita habe marbra telo amidy
Sarivongana voromahery varahina varahina taloha
Sarivongana vato marbra any anaty rano be haingon-trano ...
Vato voajanahary vato marbra zaridaina marbra vato lehibe ...
Fampandrenesana ivelany loharano rano mermaid loharano scu ...
Fivarotana mafana be habe Mermaid tsara tarehy sary ...
Large ivelan'ny vy Stainless Koons Balloon Dog Scul ...
Valan-javaboary vita amin'ny metaly fanaovana zaridaina varahina ...
Sarivongana zoo haingon-trano metaly mandatsaka ny haben'ny fiainana Chines ...
Sarivongana metaly ivelany haingo lehibe maoderina ...
Metal sary sokitra biby an-kalamanjana fiainana antitra lehibe ...
Abstract Fernando Botero Bronze soavaly vehivavy malaza ...
sary sokitra serfa reza volom-biby ho an'ny ...
Kolontsaina haingon-trano ivelan'ny trano avo lenta Ind ...
Drafitra haingon-daza romana sary sokitra fiainana habe Whit ...
100% sary sokitra fivavahana vita sokitra tanana habe natu ...
Vato voajanahary vato marbra zaridaina marbra lehibe loharano loharano
Sokajy vokatra: sary sokitra marbra
Karazana: loharano marbra
Fitaovana: Marbra voajanahary
Loharano marbra voajanahary vita sokitra tanana, azonao ampiasaina izy handravahana ny tokotaninao.
Fanohanana ara-teknika an-tserasera
Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa:
Ranomasina (Seranan-tsambon'i Tianjin)
Famaranana ety ivelany:
Poloney avo lenta
Ao anatin'ny 30 andro
Vato voajanahary vatosoa zaridaina marbra vato lehibe loharano
Marbra, Vato, Granite, Travertine, Sandstone na toy ny fangatahanao
Marbra mena milentika amin'ny masoandro, marbra hunanwhite, granite maitso ary ny sisa na namboarina
Toy ny takian'ny mpanjifa
Sary sokitra kely afaka 30 andro matetika. Ny sary vongana goavambe dia hitaky fotoana bebe kokoa.
Azo namboarina mifanaraka amin'ny volavolanao.
Afon-dabozia, Gazebo, sary sokitra biby, sary vongana ara-pinoana, Sarivongana Buddha, fanamaivanana vato, Bust vato, Toetran'ny liona, Toetran'ny elefanta vato ary sary sokitra biby vato. Vato vato loharano, vilany voninkazo vato, sary sokitra misy andian-jiro, rendrika vato, latabatra sy seza voasokitra, sary sokitra, sary sokitra marbra ary sns.
Haingo, ivelan'ny trano sy anaty trano, zaridaina, kianja, asa tanana, zaridaina
Loharano marbra voajanahary vita sokitra tanana, azonao ampiasaina izy handravahana ny tokotaninao. Manana vokatra sokitra marbra isan-karazany isika, toy ny loharano, fatana, mpamboly, tsanganana, sarivongana, tratra, fanamaivanana ary ect. Izy io dia natao indrindra ho an'ny zaridaina, villa, arabe, hotely ary toerana ara-barotra sy ect. |
Ny orinasanay dia miaraka amin'ny atrikasa maoderina sy famolavolana modely tanimanga. Manana mpamorona matihanina sy mpanakanto matihanina izahay, afaka manamboatra sary sokitra mifototra amin'ny volavolanao na ny zavatra takinao. Hainay tsara ny asa tanana nentin-drazana, ny sary sokitra andrefana ary ny vokatra misy hevitra andrefana.
Hevitra avy amin'ny mpividy
1.Amin'ny faharetan'ny fitaterana ny entako?
Ho an'ny sary sokitra kely dia soso-kevitra ny hisafidiananao ny fandefasana an-tsoratra. Matetika dia mitaky 3-7 andro. Ho an'ny sary sokitra midsize na lehibe dia matetika ampitain'ny ranomasina izy ireo. Matetika dia maharitra 30 andro.
2.Can fantatro ve ny antsipirian'ny baikoko amin'ny fizotry ny famokarana amin'ny fotoana rehetra?
Hanomboka hanao izany izahay aorian'ny nanamafisanao ny fitaovana sy ny endrika. Ho an'ny dingana rehetra amin'ny famokarana, ny fonosana ary ny faritra fitaterana dia halefanay aminao ny fampahalalana momba ny fandrosoana antsipiriany
3.Ahoana ny fametrahana ny sary sokitra?
A: Ny sary sokitra rehetra dia halefa miaraka amin'ny torolàlana amin'ny antsipiriany ho an'ny fametrahana. Afaka mandefa ekipa mpiasa any ivelany koa izahay hametrahana azy.
4. Ahoana no hanombohana ny fiaraha-miasa?
A: Hamafisinay aloha ny volavola, ny habeny ary ny fitaovana, avy eo manapa-kevitra ny amin'ny vidiny, ary hanao ny fifanarahana, ary avy eo mandoa ny vola apetraka. Hanomboka sokitra ny vokatra izahay.
Previous: Drafitra ivelany loharanom-pahalalana volo loharano mermaid amidy
Manaraka: Zaridaina ivelany zaridaina romana zaridaina gazebo vato marmora
Sarivongan-drano loharano vita amin'ny varahina
Loharano varahina zaridaina
Mpamatsy sinoa fanao marbra fahagola rano fahagola ...
Factory vidin'ny sary sokitra varahina anatiny sy ivelany ...
Loharano vato marbra manodidina an'i lady mandihy mar ...
Loharano hazo haingon-trano zaridaina zaridaina miaraka amin'ny vehivavy
Fampihaingoana zaridaina manary loharano varahina do ...
Fambolena vy fahagola lehibe an-kalamanjana any ivelany ...